Tantaran'ny famolavolana sary: ​​fivoarana sy hetsika lehibe indrindra | Famoronana an-tserasera
Tantaran'ny famolavolana sary
Nerea Morcillo | 11/10/2021 09:15 | Nohavaozina amin'ny 11/10/2021 11:34 | General, Tutorials
Loharano: Vehivavy mpanatanteraka
Ny endrika sary araka ny ahalalantsika azy dia efa ampahany amintsika hatramin'ny andro taloha ka mandraka ankehitriny. Fantatsika izay manodidina antsika rehefa miteny isika hoe "famolavolana sary" satria tonga ao an-tsaina avy hatrany ny lafiny fifandraisana amin'ny sary: soratra, marika, sary hosodoko sns. Ny tantarany dia tsy manana daty voatondro fa voafaritry ny hetsika maromaro izay nahatonga ny fivoarany.
Mba hametrahana anao amin'ny toe-javatra dia hamindra anao izahay Taonjato faha-XIX, taonjato feno hetsika izay nanomboka ny hetsika voalohany ary noho izany no andry voalohany nanombohana nananganana ny endrika tahaka ny hitantsika ankehitriny.
Omano ny zavatra ilainao rehetra satria manomboka ny dia vetivety.
1 Ny niandohana: Hetsika sy mpanakanto voalohany
1.2 Ny sekoly Bauhaus
1.3 Art Deco (France)
1.4 taona 30
1.5 Ireo afisy ady malaza
1.6 Ny taona 50 tany Eropa
1.7 Ny taona 50 tany Amerika
1.8 Volavola tamin'ny taona 60 sy 70 tany Eropa
1.9 Volavola any Amerika (60 sy 70)
1.10 Ny taona 80 tamin'ny famolavolana sary
1.11 Famolavolana sary eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny
Ny niandohana: Hetsika sy mpanakanto voalohany
Hetsika lehibe no nitranga tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny iray tamin'izy ireo dia nanomboka tamin'ny faran'ity taonjato ity. Ny kolontsaina tandrefana dia miankina amin'ny revolisiona indostrialy sy ny fivoaran'ny teknolojia. Misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny isan'ny mponina izany ary ahafahana mandroso amin'ny serasera. Ny indostria lehibe dia mamela ny famokarana haingana izay vokatr'izany dia latsaka tanteraka ny sandan'ny artisanaly ny vokatra.
Inona no vahaolana mety hisy aorian'ity fifandonana ity? Eny, ao amin'ny Fanjakana Mitambatra izay fantatsika ankehitriny fa ny hetsika Zavakanto sy Crafts notarihin'i William Morris. Niorina tamin'ny famerenana ny sandan'ny artisanina ity hetsika ity. Mampalahelo fa tsy tratra ny tanjona fa nanana ny lazany tokoa io hetsika io satria ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany dia nanaiky azy ireo tamin'ny fomban'izy ireo manokana sy naneho ny fifandonana teo amin'ny sanganasan'izy ireo. Ary toy izany no maoderina.
Eto isika dia manazava ny atao hoe maoderina sy ny mampiavaka azy izaitsizy.
Loharano: Kolontsaina ara-nofo
Antsoina ihany koa ny maoderina Art Noveau, niseho tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Noheverina ho iray amin'ireo hetsika kanto manan-danja indrindra tamin'izany fotoana izany izy ary ny tetezamita dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Belle Epoque izay naharitra hatramin'ny nanombohan'ny Ady lehibe voalohany.
Ny modernista dia niaina tamin'ny zavakanto sy ny fiainana ary tena nitaona ny filozofia ankehitriny Jonh Ruskin ary ny malaza William Morris, alohan'ireo hetsika toa ny realisme na impressionisme. Mihaona toetra maromaro ny maoderina:
Mampiasa singa voajanahary izy ireo hanatsarana ny asany
Mampiasa fitaovana vaovao amin'ny asany izy ireo aorian'ny fandrosoana ara-teknolojia
Mikaroka asymmetrika izy ireo ary maneho izany amin'ny asany
Tamin'ny maoderina dia nisy andiana mpanakanto nipoitra izay tena zava-dehibe amin'ny tontolon'ny famolavolana sy ny zavakanto.
Charles Rennie dia mpanao mari-trano malaza sy mpamorona teraka tany Scotland tamin'ny 1868. Ny tena ampiasainy amin'ny sanganasany dia tarehimarika geometrika sy tsipika mahitsy na miakatra. Ny sanganasa malaza indrindra dia misy: Peonies, The fort and Armchair.
Mpaka hosodoko sy mpanakanto Czech izy ary heverina ho iray amin'ireo mpanakanto be mpanakanto indrindra amin'ny Art Nouveau. Mampiasà endrika voninkazo betsaka izy ary mampiavaka ny fiderana ny vehivavy amin'ny sangan'asany. Asa toy ny: Zodiac, Chocolat Ideal ary Job Cigars dia miavaka.
Peter dia iray amin'ireo mpamorona sary tamin'ny androny, fantatra amin'ny famolavolana ny mombamomba ny orinasa, ny afisy ary ny milina fanoratana. Tena miavaka ny fombany satria nitady endrika am-perinasa sy madio kokoa izy. Anisan'ny sangan'asany ny: Tea Electric sy ny ala.
Ny sekoly Bauhaus
Loharano: Mahaliana tokoa
Taorian'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny taonjato XX ny Ady Lehibe Voalohany dia natao tamin'ny taona 1914. Tamin'io taona io dia natsangana ny sekoly Bauhaus tao Weimar (Alemana). Ity sekoly ity dia nanana fitaomana betsaka teo amin'ny tontolon'ny famolavolana, ny kanto ary ny maritrano. Mpanakanto maro no nanangana an'ity sekoly ity, nitsangana tamin'ny fihetsiketsehana mpanao asa tanana ary nanomboka nianatra ny endrika, fitaovana, firafitra, habaka ary ambonin'izany rehetra izany ny maha-zava-dehibe ny loko amin'ny endrika.
Ny bauhaus dia namolavola ny fantatsika amin'ny hierarchy typographic, izay nampiasa tsipika, bara, teboka na kianja mba hizara ny habaka sy hitazomana ny sain'ny mpijery. Ny sasany amin'ireo mampiavaka azy dia:
Liana amin'ny fampiasana fitaovana maoderina (vera)
Fironana goba sy asymméric amin'ny tranony
Nampiasa fahatsorana izy ireo tamin'ny endrika (kely kokoa ny)
Fironana ho an'ny minimalism biolojika
Ireo mpanakanto izay ao amin'ity sekoly ity dia:
Izy dia heverina ho iray amin'ireo mpanakanto manan-kery indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX, niavaka tamin'ny fiasana tamin'ny trangan-javatra nisintona ary miavaka amin'ireo sangan'asany: Cat and Bird and Castle and Sun.
Izy dia mpandaha-teny expressionista, abstract ary mahay loko sy famoronana. Miavaka ny Composition Valo sy ilay Blue Rider.
Mpanakanto ary manjaka amin'ireo famoronana mavitrika niasa tamin'ny tsipika mitsivalana sy mitsangana. Anisan'ny sanganasany ny: Wall Artulatedated and Double Ascension.
Nifantoka bebe kokoa tamin'ny sary sy ny typography i Moholy ary niavaka tamin'ny sanganasa toa ny Space Modulator.
Art Deco (France)
Amin'ny firenena sisa eropeana dia noforonina koa ny hetsika. Tonga ny Art deco, amin'ny dingana iray izay nanolo ny toetran'ny modernisma tsipika tsotra sy mahitsy.
Art Deco dia eken'ny besinimaro tao amin'ny Exposition Internacionale des Artes Decoratifs Et Industriels Modernes any Paris tamin'ny 1925. Ity fomba ity dia avy amin'ny Modernism sy ny sekoly Bauhaus. Izy io koa dia misy fiantraikany amin'ny fanabeazana rosiana izay nanampy betsaka tamin'ny fahamendrehana sy ny hamafin'ny andalana sy ny endrika.
Ny mampiavaka ny Art Deco dia ny maha-zava-dehibe nomen'izy ireo ny fanavaozana ara-teknolojia tamin'izany fotoana izany, amin'ny singa sasantsasany amin'ny asa toy ny skyscraper, jiro elektrika, radio, fiaramanidina sns. Avy ny loko fauvism ary aseho amin'ny magazine sy peta-drindrina izay noforonin'ny mpanakanto maro.
Ao amin'ny mpanakanto Art Deco toy ny:
Mampiasa kabary amin'ny asany izy ary mitazona ny toetra maha-kanto azy. Anisan'ireo sanganasany ny Le Gosse sy ny Cuisine Electrique.
Cassandre dia mpanakanto sy mpamorona afisy frantsay. Ny asany dia voataonan'ireo avant-gardes artista tamin'ny vanim-potoana nifandonana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izaho dia nanambatra singa toy ny kanto, lahatsoratra ary sary. Anisan'ny sanganasany i: Normandie sy Dubonnet.
Loharano: Ilay maso eny amin'ny lanitra
Teo aloha dia efa niresaka momba ireo singa izay ampahan'ny andavan'andro isika rehefa mamolavola, saingy efa nanontany tena ve ianao hoe oviana no nanomboka zava-dehibe ny famolavolana endritsoratra? Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, nanonona lehilahy iray izahay Gutemberg Saingy tsy mijanona eo ny zava-drehetra. Ny typography dia nanana ny fivoarany ary mazava indrindra, nanomboka nananany izany tamin'ny taon-jato XX, manokana tamin'ny taona 30.
Nandritra ity taona ity dia niaina hetsika ara-tantara ary fotoana feno fotokevitra ara-tsosialy sy ara-politika samihafa io. Noho io antony io dia nipoitra ny hetsika toy ny Futurism, Dadaism ary Surrealism. Amin'ity taona ity ny endritsoratra toy ny Futura na Gill Sans.
Mpanoratra toa an Lester Bell na Herbert Mater.
Ireo afisy ady malaza
Ny ady ady dia faritana ho karazana ady ifanatrehan'ny olona maromaro, amin'ity tranga ity ny ady ady izay horesahintsika dia niatrika firenena roa, Alemana sy Polonina. Ity ady ity dia nanomboka tamin'ny 1939 ary niteraka ny fantatsika hoe Ady lehibe II. Tsy ady teo amin'ny firenena roa ihany izany fa fifandonana teo amin'ny Tandrefana sy ny kaominista.
Ary inona no nataon'ny mpamorona tamin'ity indray mitoraka ity? Betsaka tamin'izy ireo no nisafidy ny handeha sesitany fa ny hafa kosa nohamafisina mba hiray hina amin'ny fireneny. Ary inona no ifandraisan'ny afisy ady amin'izany rehetra izany? Tamin'ny fotoanan'ny ady, indrindra tamin'ny Ady lehibe voalohany, dia noforonina ny poster, ary antsoina koa hoe politika na fampielezana. Natao hametrahana ity afisy ity miaraka amin'ny tanjon'ny mandresy lahatra ary miaraka amin'izay dia manodinkodina ny fiaraha-monina mba hampiraisan'izy ireo ny governemanta.
Ireo poster dia nahatanteraka lohahevitra sy fomba fiteny maro, fa teo amin'izy ireo dia niavaka izy ireo noho ny:
Ireo mpamorona ireny afisy ireny dia nanatrika ilay antsoinay hoe kabary ary nampiasa feo mifampiresaka, ka nanintona ny fihetsem-po sy fahatsapana
Nampiasain'izy ireo ny psikolojia ny sary mba hamoronana sary sarotra sy sarotra adino
Napetrak'izy ireo alohan'ny sary ny soratra, izany hoe nanjary nalaza kokoa ny lahatsoratra noho ny lohateny manokana
Nampiasa loko sahisahy izy ireo handresena lahatra ny sain'ny besinimaro
Ny loharanom-bolan'izy ireo lehibe indrindra dia ny tsipika sary, io no niotrika an-tampon'ireo singa hafa
Nampiasain'ny Rosiana ny fambolena tao anaty afisiny, ka namorona singa mijanona
Ireo afisy an'ny Ady Lehibe Faharoa dia nanohy ny tsipika sy ny toetrany mitovy amin'izany. Anisan'ireo mpanakanto afisy nahitana fitaomana lehibe kokoa tamin'izany fotoana izany:
Alexander no mpanakanto afisy be mpanolo-tsaina indrindra, niavaka izy tamin'ny alàlan'ny fampiasana sary geometrika niaraka tamina loko maivana. Maro amin'ireo sangan'asany no mamorona fihetsiketsehana amin'ny endriny noho ny fomba nanaparitahany ireo singa (lahatsoratra - sary).
Ny sasany amin'ireo sanganasany dia mandray avy amin'ny: Ilay Lehilahy Afo sy Rechevik.
Ny taona 50 tany Eropa
Loharano: Juan March Foundation
Any Eropa, indrindra any Suisse, hetsika maro no noforonina fa ny malaza indrindra dia tsy isalasalana fa tao Fomba iraisam-pirenena Soisa. Ity fomba ity dia nanomboka tamin'ny taona 50 ary naharitra hatramin'ny taona 70.
Ny hetsika tsirairay izay noforonina nandritra ny tantara dia nanana fisondrotana bebe kokoa tamin'ny lafiny sasany noho ny hafa, amin'ity tranga ity, io fomba io dia naneho ny fiandohan'ny revolisiona an'ny famolavolana fanontana. Ary inona no mampiavaka an'io fomba io? Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy ireo dia ny nahaizan'izy ireo nampivondrona ny asymmetrika ao amin'ireo sanganasa, tratra izany tamin'ny alàlan'ny fampiasana grid typographic sy grid.
Ny mampiavaka azy koa dia ny fampiasana ny sans-serif typefaces sy ny fampiasana sary ary ny fandavana ny sary. Ny lafin-javatra izay mitambatra tsara indrindra amin'ity fomba ity dia:
Ny mazava, ny fahamendrehana ary ny zava-kendrena amin'ny asa ampiasana endritsary sans serif
Fanehoana ny typografia ho singa fototra
Rehefa nandeha ny fotoana dia niforona ireo sekoly soisa tany amin'ireo tanàna toa an'i Genève, Lausanne na Zurich.
Anisan'ireo mpanakanto misolo tena an'ity hetsika ity ny: Theo Balmer, Emil Ruder ary Max Bill.
Ny taona 50 tany Amerika
Hatreto dia nanatsoaka hevitra izahay fa i Eropa dia iray amin'ireo cradles manan-danja indrindra amin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny endrika. Saingy tsy mifarana eto ny tantara, noheverina ho firenena matanjaka lehibe i Amerika tamin'ny fotoanan'ny ady sy ny politika. Manomboka eo antenatenan'ny taonjato io fomba io XX.
Ireo mpamorona amerikanina dia mikendry ny hiala amin'ny fomba eropeana / soisa, ary namorona fomba famoronana sy tsy ara-dalàna kokoa ho azy ireo. Izany no nahaterahantsika izay nahaterahantsika American School of Graphic Expressionism.
Ity sekoly ity dia famintinana ny fitaomana zavakanto izay soloin'ny Amerikanina ny endrika. Famolavolana solontena maro kokoa, miaraka amin'ny tsipika sary navoaka ary lavitra ny static sy ny morale. Nanaitra ny loko nampiasain'izy ireo ary nanafika ny mpijery ary nampahafantatra azy ny hafatra. Ireo endritsoratra dia tsy dia geometrika loatra ary nilalao tamin'ny sary izy.
Toy izao no niantombohan'ny teknika artista voalohany:
Ny pop art dia nanomboka natomboka tamin'ny faramparan'ny taona 50 ary ny solontenany dia artista iray antsoina hoe Andry Warhol, na dia mpanakanto toa Roy Fox sy Jasper Johns. Ny tena tanjon'ity fomba ity dia ny hisolo tena amin'ny alàlan'ny foto-kevitra an-tsary ny fiarahamonin'ny mpanjifa tamin'izany fotoana izany, ny fivoarana ara-teknolojia sy ny fandrosoana ary ny fitakiana kolontsaina ambonin'olona feno olo-malaza.
Mahita endri-javatra toy ny:
Loko matevina sy sary malaza
Loharano sary atolotra amin'ny endrika tantara an-tsary
Psychedelia dia teknika kanto iray izay nanomboka namoa tamin'ny tapaky ny taona XNUMX. 60 Any Amerika. Tena nitaona ny maoderina sy ny Art Nouveau. Ary avy aiza ity hetsika ity? Taorian'ny ady maro sy ny ady ara-tsosialy, toekarena ary politika, mpanakanto maro no nahatsapa fa ilaina ny mamorona fomba iray hanehoana ny atin'ny zanak'olombelona.
Mampiavaka azy ny:
Fampiasana tarehimarika abstract sy endritsoratra tsy tomombana tanteraka
Vokatry ny refy telo-lafiny izay mampisy ny valin'ny hallucinogenika amin'ny zava-mahadomelina
Loko manaitra izay avy amin'ny hetsika ara-tsosialy (hippies)
Nandritra ny taona 50/60 taona dia toy ny Saúl Bass sy Paul Rand.
Volavola tamin'ny taona 60 sy 70 tany Eropa
Loharano: Tip an-tsary
Ny taona 60 sy 70 tany Eropa dia nohazonin'ireo malaza Ady mangatsiaka. Ny ady mangatsiaka dia niteraka fifandonana teo amin'ny firenena toa an'i Etazonia sy ny USSR. Izany dia nanjary firenena maro, anisan'izany i Polonina, nanomboka nahaleo tena.
Ny fahaleovan-tena dia tsy nitondra olana ara-tsosialy sy ara-politika fotsiny fa, ho fanampin'izany, mpanakanto maro no nanomboka namorona ny fomban'izy ireo manokana. Ity fomba ity dia nalaina avy tamin'ny tsy fahazoana antoka sy ilay «arte« arte «collage». Fa andao tonga any amin'ilay teboka, ny firenena nanana ny lazany indrindra nandritra ny folo taona dia i Angletera, izay nipoitra ny fahatsapana fanafahana manokana sy ireo vondrona toa ny Punk.
Noho io antony io, ny fomba anglisy dia avy amin'ny tanan'ny afisy noforonin'i Jamie reid. Ny fihetsiketsehana punk dia nampihetsi-po ny afisy, ka namorona singa sary feno loko manaitra sy mavitrika ary mpandray anjara tamin'ny tarika izy Sex Pistols hamolavola rakotra rakipeo maro.
Volavola any Amerika (60 sy 70)
Loharano: ny firenena
Tamin'ny folo taona 60 sy 70 tany Amerika, nipoitra ny mpanakanto vaovao izay manome lanja lehibe ny fanehoan-kevitra ary voafidy ny fomba fampiasana loharano hafa toy ny sary na sary. Iray amin'ireo mpanakanto be solontena indrindra Milton Glaser.
Teraka tao New York ity mpanakanto ity tamin'ny taona 1929. Nikitika ireo faritra toa ny marika, famoronana endrika, famolavolana afisy, endrika anatiny ary sary izy.
Tamin'ny 1966 dia namorona iray amin'ireo sangan'asa be mpahalala indrindra ho an'ny famolavolana sary izy tamin'izany fotoana izany: afisy nalaina avy tamin'ny iray amin'ireo rakipeon'ilay mpihira Bob Dylan. Taona maro taty aoriana dia namolavola ny magazine The New York izy miaraka amin'ny iray amin'ireo tetikasany malaza indrindra: Tiako i New York.
Ny taona 80 tamin'ny famolavolana sary
Ny folo taona 80 dia nanamarika ny fandrosoana ara-teknolojia. Io dia nahafahan'ny mpanakanto sy mpamorona maro hanana eo am-pelatanan'izy ireo andianà programa izay nanamora ny asan'izy ireo teo amin'ny sehatry ny sary. Ny fantatsika amin'ny vanim-potoana niomerika, dia feno fandalinana momba ny famoronana sy ny teknika sary sy typografika vaovao nipoitra.
Iray amin'ireo mpanakanto be solontena indrindra Wolfgang Weingart.
Izy dia iray amin'ireo mpanakanto manaita-tsaina mahazatra tamin'ny taona 80. Ny endriny dia voataona amin'ny fomba soisa ary izy dia loharanom-aingam-panahy ho an'ny mpanakanto maro. Anisan'ireo sanganasa malaza indrindra aminy ny: Typography 2.
Famolavolana sary eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny
Ankehitriny fantatrao bebe kokoa momba ny tantaran'ny famolavolana sary. Tokony ho fantatrao fa ny evolisiona rehetra dia mitohy amin'ny volavolantsika isan'andro. Rehefa mamolavola mari-pahaizana momba ny orinasa, peta-drindrina, fonosana amin'ny magazina na koa rehefa maka sary sy manao sary isika, Mila mahazo aingam-panahy amin'ireo mpanakanto efa nanoratra ny tantarany sy namela ny marika azony isika.
Mbola tsy fantatsika ny fivoaran'ny evolisiona amin'ny taonjato faha-XNUMX, fa azonay antoka fa ireo teknika sy hetsika artista noresahinay taminao dia azo antoka fa noho izy ireo, hevitra sy famoronana vaovao mipoitra.
Ny olon-drehetra amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika rehefa mamolavola isika dia mamorona hevitra avy am-boalohany ihany koa ary izany foto-kevitra izany no niandohanay sy ny fivoarantsika.
Noho io antony io, ny tantara dia tsy voafaritra ho andiana hetsika fotsiny fa koa ny fivoarana sy ny fitomboan'ny tena manokana. Manasa anao izahay hanohy handalina sy hianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny famolavolana sary.
Raha ny fanazavana, efa nanoratra ny anao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tantaran'ny famolavolana sary